Maitiro ekuongorora mhando yeinternet yako kuti uone Netflix | IPhone nhau
Imba yedu isina waya yekubatanidza inowanzotiunzira matambudziko mazhinji kana zvasvika pakunakidzwa nevanozivikanwa vedu vhidhiyo vanopa se Netflix o Amazon Prime Vhidhiyo. Muzviitiko zvakawanda isu hatigone kuita chero chinhu nekuti imhaka yekugadziriswa kwekambani router ine gadziriso yakaoma, zvisinei, tinogona kutsvaga dambudziko kubva pamudzi.
Isu tinokuratidza maitiro aunokwanisa kuongorora yako WiFi kubatana kuti uzive kana zvakaringana kutarisa Netflix kana Movistar + nemazvo. Nenzira iyi iwe unokurumidza kuona kana dambudziko riri muchishandiso chauri kushandisa kana muchinhu chinoshandiswa pakutamba, haugone kupotsa iyi dzidziso.
Chekutanga pane zvese iwe unofanirwa kuziva kuti tiri kuzoshandisa chishandiso icho chinonyatso kuzivikanwa kwatiri tese, isu tiri kunyatso kutaura nezvazvo Speedtest, sevhisi inowanikwa internet kana iwe uchida kuyedza kubva kuMac yako, kana kubva kune chayo chishandiso chaunokwanisa kurodha mahara muApple App. Paunenge iwe watora pasi iko kunyorera, inguva yekuishandisa. Isu tinokuyeuchidza kuti izvi zvinowirirana nezvose zviri zviviri iOS pane yako iPhone uye iPadOS pane yako iPad, asi kwete izvo chete, isu tinotova neshanduro inoenderana neApple TV (tvOS), usarasikirwa nayo.
Vhura iyo application Speedtest
Sarudza bhatani "Vhidhiyo" pazasi pemenu, pakati chaipo
Dhinda «OK» uye ongororo ichatanga
Paunenge wapedza zvinokuudza iwe mhando yevhidhiyo mhando yaunogona kutamba pasina matambudziko
Sezvo kuiverenga hakuna kufanana nekuiona ichirarama, ndinokusiira chidimbu chidiki umo iwe paunogona kuona kuti zviri nyore sei kuita ongororo iyi.
Saka unogona kutarisa zviri nyore mhando yevhidhiyo inoridzwa neyako internet kubatana. pic.twitter.com/ug3NVDNbuG
Nenzira iyi uye munguva pfupi chete iwe unozogona kutarisa kana yako internet yekubatanidza yakanyatso kukwana nakidzwa nemhando yepamusoro yeNetflix kana chero mumwe mupi internet.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuongorora mhando yeinternet yako kuti uone Netflix
Iwe murume, chakanakisa chinhu ndechekuti uzviite kubva fast.com iyo inobva kuNetflix, ndinofunga inonyanya kuvimbika uye hazvidiwe kuisa chero App.
Mhan'ara miriyoni-madhora chitsotsi muApple application chitoro